China ZW32 / Zero / G 24kV Pole Mounted Automation Recloser Circuit Breaker orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Aiso
ZW7 / CT (namboarina) 35kV Substation Transformer ivelany ...
ZW7 / CT (namboarina) 35kV Substatio Transformer ivelany ...
ZW32 35kV Pole nitaingina Circuit mandeha ho azy Rec ...
ZW32 / Zero / G 24kV Pole Mounted Automation Recloser Circuit Breaker
Nampiasaina: Fantsom-bokatra mipetaka volo
Naoty naoty: 11kV, 24kV
Naoty ankehitriny: 630A / 1250A
Fanaterana haingana, vidin'ny mpanamboatra, fiantohana iraisam-pirenena
ZW32 / Zero / G 24kV Pole napetraka mpitaingina boriborintany mandeha ho azy:
Switchgear vaovao eo an-tsoratry ny vokatra andian-dahatsoratra mpanaparitaka vaksinay. Ny tanjany dia 24 kV. Izy io dia mihatra amin'ireo toerana misy haavon'ny herinaratra toy izany, ao anatin'izany ny tsipika ambonimbony, orinasa indostrialy sy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, toby fijanonan'ny herinaratra, toeram-pitrandrahana, sns. Izy io dia manana fahombiazana tsara amin'ny fanaovana lalan-kely sy ny famakiana. Izy io dia miavaka amin'ny fanamboarana mandeha ho azy, ny fandidiana tsy miova ary ny androm-piainana maharitra
Toetran'ny tontolo iainana
Temperature manodidina: - 40 ° C ~ + 40 ° C
Mamandoana: ≤95% na ≤90%
Tsindry rivotra: ≤700Pa (mitovy amin'ny hafainganan'ny rivotra 34m / s)
Hamafin'ny seismika: ≤8
* Tsy misy afo, fipoahana, fahalotoana lehibe, fanodinkodinana simika ary fikorontanana mahery vaika amin'ny toerana.
1.Trafitra karazana andry telo-dingana (fiarovana, fiainana maharitra sns);
2.Mampiasa rafitra mihidy tanteraka, ny akorany vita amin'ny vy tsy misy fangarony (anti condensation, anti salt mist sns);
3.Ny insulation dia mandray ny epoxy resin sy ny silipo vita amin'ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny silipo. Afaka manohitra ireo tranga ivelany izy io. Tsy misy fitaovana fanampiny ao amin'ity kabine ity.
Ny fiasan'ny lohataona amin'ny alàlan'ny herinaratra sy ny tanana, dia afaka manampy fitaovana fanaraha-maso lavitra. Herinaratra famatsiana herinaratra tsy mihoatra ny 30W. Famolavolana fitaovana buffer, fihenjanana ambany, tabataba ambany.
5.Vacuum interrupter dia mandray teknolojia manokana, tsy ilaina ny plating. Ny fizotry ny famokarana dia afaka miantoka ny fihenan'ny vokatra, ary ny tanjaka mihombo dia lehibe noho ny 130 MPa.
6.Ny mpanova ankehitriny dia mandray ny switch switch an'ny fiovam-po ankehitriny (Mora ampiasaina, fiarovana amin'izao fotoana izao).
7.Automatika miverina miaraka amin'ny mpanara-maso mifanaraka amin'ny sehatra.
Naoty naoty kV 24
Naoty amin'izao fotoana izao ny famakiana lalan-kely
Raha manana fepetra manokana hafa ny mpanjifa, ny orinasanay dia afaka manome anao ny tena mahafa-po indrindra!
Drafitra sy refy fametrahana
Teo aloha: ZW32 / Zero Sequence 24kV Fanamafisana mandeha ho azy herinaratra
Manaraka: Mpamatsy horonan-tsarimihetsika vita amin'ny fuse 11kv 12kV15kV namboarina ho an'ny kalitao namboarina
fanapahana faritra mihodina
fanapahana herinaratra mandeha ho azy
vaky boribory vcb
ZW7 / CT (namboarina) 40.5kV Transformer ivelany ...
ZW32 / CT 24kV Pole ivelany mitaingina volo ...
ZW7 / CT (namboarina) 35kV Transformer Subst ...
ZW32 24kV Automatic Recloser vacuum Circuit Bre ...
ZW32 / 3CT / PT / G 24kV Pole ivelany mitaingina vacuum ...
ZW32 / 3CT / PT / Controller 12kV Pole mitaingina vacuum ...